Maxkamadda sare ee maamulka Somaliland oo go’aan kama dambeys ah ka gaartay khilaafkii xisbiga UCID – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamadda sare ee maamulka Somaliland oo go’aan kama dambeys ah ka gaartay khilaafkii xisbiga UCID
Maxkamadda sare ee maamulka Somaliland ayaa maanta soo saartay go’aan kama dambeys ah oo ay ka gaartay khilaafkii mudadda dheer soo jiitamaayay ee u dhaxeeyay Xisbiga Mucaaradka ee UCID.
Khilaafka ayaa sida la sheegay u dhexeeyey guddoomiyaha Xisbiga UCID Injineer Feysal Cali Waraabe iyo musharaxa xisbiga Jamaal Cali Xuseen, waxaana uu salka ku haayay in Faysal Cali Waraabe oo Jamaal uga baxay balantii oo ku qabsaday Musharaxnimada xilka madaxweynaha, taasoo keentey in xisbugu uu laba garab u kala jabo.
Go’aanka maxkamadda ay soo saartay oo ka koobnaa ilaa 4 qodob ayaa ahaa mid lagu xalinaayo khilaafka, waxaana ay qodobadaasi kala ahaayeen
Muddo 60 cisho gudaheed ah waa inuu xisbiga UCID ku qabsado shir-weyne aan caadi ahayn, kana bilaabmaysa maanta oo ay taariikhdu tahay 25-Septermber 2016-ka, waxaana ergadda shir-weynaha loo raacayaa xeerka Xisbigga ee ay labada garab isla gaareen sanadkii 2012-ka.
Waxay maxkamadda sheegtay in guddigga qaban-qaabadda shir-weynaha oo ka kooban 10 xubnood ay labadda dhinac kala qaadanayaan, islamarkaana uu marjicoodu noqonayo hogaanka sare ee xisbigga.
Waxay Maxkamaddu caddeysay in heshiiska ay wada-galeen Feysal Cali Waraabe iyo Jamaal Cali Xuseen uu ansax noqonaayo uun marka uu qabsoomo shir-weynaha xisbiggu.
Waxa kale oo ay maxkamaddu burisay qodobo ku jiray go’aamaddii guddigga ururadda siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka.
Ugu dambeyntii, labada dhinac ee Xisbiga UCID ayaa soo dhaweeyay go’aanka maxkamadda sare ee maamulka Somaliland, waxaana la filayaa in labada dhinac isku soo dhowaadaan islamarkaana ay dhaqan geliyaan qodobadii ay soo saartay maxkamadda.